‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिवद्ध’ – News Portal
‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिवद्ध’
फिचर मुख्य खबर समाज
October 1, 2019 epradeshLeaveaComment on ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिवद्ध’
शिक्षा सरोकारवालाको जमघट …
दाङ, १४ असोज । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि जिल्लाका सरोकारवालाहरु एक भएका छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधार अहिलेको आवश्यकता र अनिवार्यता भएको भन्दै जिल्लाका शिक्षा सरोकार तथा जनप्रतिनिधिले सामूहिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
जिल्लामा सुरु भएको प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रमको आयोजनामा भएको सरोकारवालासँगको नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । सुधारका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने समेत सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरुको सक्रियता बढ्दै जान थालेपछि पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउन थालेको अभिभावकरुले बताएका छन् । आफ्ना छोराछोरीले बिद्यालयमा गएर कसरी पढिरहेका छन् ? के गरिरहेका छन् ? उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषयमा अभिभावकहरुले चासो दिन थालेपछि विगतको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुँदै गएको अभिभावक बेलमती वलीले बताइन् ।
सरकारले उपलव्ध गराउने छात्रवृद्धि पाइन्छ भन्ने खबर सुनेपछि मात्रै विद्यालयमा जाने अभिभावक पछिल्लो समय अन्य समयमा पनि विद्यालयमा जान थालेको र शिक्षाको सुधार भइरहेको तुलसीपुर–३ दमारगाउँकी कमला विकले बताइन् ।
गाउँघरमा शिक्षकहरुले विद्यालय आउनु भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा विभिन्न बहाना गरी विद्यालय र शिक्षकहरुबाट टाढै रहन खोज्ने अभिभावक अहिले आफै नै विद्यालयको गतिविधि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निगरानी गर्दै आएका छन् ।
जसका कारण विद्यार्थीहरुप्रति शिक्षकहरुमा कार्यभार थपिएको छ भने समयमै कक्षामा उपस्थित हुने र पढाउने गरेको उनले बताईन् । ‘पहिले कक्षामा शिक्षक नै नजाने, नपढाउने अवस्था थियो, उनले भनिन् ‘जब यो कार्यक्रम आयो त्यसपछि हामी अभिभावक पनि विद्यालय जान थाल्यौँ, पढाइ पनि दिनप्रतिदिन राम्रो हुँदै जान थाल्यो ।’
विद्यालयमा निरन्तर अभिभावकहरु जाने थालपछि विद्यार्थीहरुका पनि पढाइप्रति चासो बढ्न थालेको बताउँछिन् तुलसीपुर–८ अश्वारा निवासी जयकला वली । ‘विद्यालयबाट सरहरुले पर्चा काटेर पठाउँदासमेत विद्यालयमा नजाने अभिभावहरु पनि पनि आजभोलि महिनाको २/३ पटक विद्यालय जाने गरेका छौँ’ उनले भनिन् ‘विगतको तुलनामा अहिले अभिभावहरुमा धेरै नै सुधार आएको छ ।’
कान्छो छोराले कक्षा २ मा पढ्ने भएकै कारणले पनि आफू यो कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउँदै उनले कार्यक्रम निकै उपयोगी भएको बताईन् । आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा कस्तो वातावरण चाहिन्छ ? घरमा कस्तो वातावरण उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत भएका छौँ । बालवालिकाहरुको नतिजासमेत राम्रो आउन थालेको उनले बताईन् ।
नेतृत्व विकास तथा पैरवी कार्यक्रम
यसैबीच सोमबार घोराहीमा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि जिल्लास्तरीय नेतृत्व विकास तथा पैरवी कार्यक्रम भएको छ । शिक्षा समन्वय तथा विकास इकाई निमित्त प्रमुख देवमणि चौधरीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बालशिक्षामा अनिवार्य सुधार ल्याउनुपर्ने बताईएको थियो ।
बालबालिकालाई सिकाउने, बुझाउने र आफूले बुझ्ने कुरामा मात्रै आजको शिक्षा सीमित रहेकाले यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको विभिन्न शिक्षा सरोकारवालाहरुले बताए ।
बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउने नाममा उनीहरुको शारीरिक, मानसिक, सर्वाङ्गीण विकासको अवहेलना गर्ने प्रवृत्तिले पछिल्लो समय बालबालिकाहरु सिकाइमा कमजोर बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
शिक्षा परिवार, समाज र राष्ट्रका हितमा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले कक्षा १ देखि ३ सम्मको पढाइलाई प्रविधिमैत्री, युगमैत्री, दीर्घकालिन शिक्षा बनाउन जरुरी भएको बताए ।
चौधरीले कक्षाकोठामा आधारित शिक्षाले कहिल्यै प्रगति गर्न नसक्ने बताए । उनले आफ्ना सन्तानले कसरी पढिरहेका छन् ? उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? विद्यालयमा कसरी पढाइ भईरहेको छ ? विद्यालयमा छन् कि छैनन् ? आज मैले के पढाउनु छ ? कसरी बुझाउनु छ ? लगायतका विषयमा शिक्षक र अभिभावकले समयमै ध्यान दिन नसके विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था दयनीय बन्दै जाने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीले समयसापेक्ष शिक्षा दिनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए । २१औँ शताब्दीको शिक्षा र १६औँ शताव्दीको शिक्षा एउटै शैलीको भएको भन्दै उनले पढाउने शैली र विद्यालयका पुराना क्रियाकलापलाई बालबालिकामैत्री बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
प्रारम्भीक शिक्षा नै शिक्षाको मुल जग भएकाले यसमा समयमै सबैजना सजक बन्नुपर्ने उनले आग्रह गरे । प्रमिला शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट सुरुभएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण ईजिआरपीका कार्यक्रम संयोजक हल्लुप्रसाद चौधरीले गरेका थिए । यो कार्यक्रम ४ सय २१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सञ्चालन भएको छ ।
रातिको समयमा बढी निगरानी
महङ्गीले पुरेको बजार
विद्यालयमा प्रहरी चौकी
July 19, 2019 epradesh
सम्झौता कार्यान्वयनको माग
January 5, 2020 epradesh
चिसोले जनजीवन प्रभावित, किसान खुशी
January 8, 2019 epradesh